तपाई कुनै सहकारी संस्थाको सदस्य वन्दैहुनुहुन्छ ? यी कुराहरु बुझेर मात्र सदस्य वन्नुहोस - सहकारीखबर
तपाई कुनै सहकारी संस्थाको सदस्य वन्दैहुनुहुन्छ ? यी कुराहरु बुझेर मात्र सदस्य वन्नुहोस
२३ असार २०७१, सोमबार
Share : 2,042
सहकारी संघ/संस्था, तीनका सदस्य र सर्व साधारणहरुका लागि जानकारीमूलक सूचना
१. तपाई कुनै सहकारी संस्थाको सदस्य वन्दैहुनुहुन्छ ? या वचत गर्न लाग्नु भएको छ ? यी कुराहरु बुझेर मात्र सदस्य वन्नुहोस ।
सहकारी संस्थाको कार्यालयमा गई संस्थाको साइन वोर्ड र दर्ता प्रमाण पत्र हेरेर मात्र शेयर खरिद गर्नुहोस । शेयर खरिद गरे पछि तपाई संस्थाको सदस्य बन्नु हुन्छ । सदस्य वनेपछि मात्र वचत तथा ऋण र अन्य कारोवारमा संलग्न हुनु होस । दर्ता नभएको, प्रमाणपत्र र कार्यालय स्थापना नभएको सहकारी संस्थाको सदस्य नवन्नुहोस ।
संचालक समिति तथा लेखा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नाम, ठेगाना, निर्वाचन भएको मिति र अवधी वारे जानकारी लिनुहोस । कार्यावधी समाप्त भै सकेका संचालक समिति भए सदस्य नवन्नुहोस ।
संस्थाले प्रत्येक वर्ष साधारण सभा लेखा परीक्षण गराएको छ छैन ? बुझ्नुहोस । यस्तो नगर्ने संस्थाको हिसाव किताव पारदर्शी नहुने हुंदा सदस्यता नलिनुहोस ।
सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्र तपाई वसेको क्षेत्रमा पर्छ पर्दैन ? सो बुझेर कार्य क्षेत्रका स्थायी वसोवास भएका मानिसहरु मिलेर स्थापना गरेकोे सहकारी संस्थाको मात्र सदस्य वन्नुहोस ।
एकै घर परिवार र नाताका मानिसहरुमात्र संचालक भएका वा एकै परिवारका एक भन्दा वढी संचालकहरु भएका संस्था पारिवारिक संस्था हुन् । त्यस्तो संस्थामा सदस्य नवन्नुहोस ।
तपाईको उदेश्य र पेशासंग सम्वन्धित वा मिल्दोजुल्दो संस्थाको मात्र सदस्य वन्नुहोस । एकै प्रकृतिको एक भन्दा वढी संस्थाको सदस्य नबन्नु होस् र सदस्य भएको संस्थामा सक्रिय सहभागिता जनाउनुहोस ।
सदस्य नवनी वचत, ऋण तथा अन्य कारोवार गर्नु भयो भने तपाईले संस्थाको हर हिसाव हेर्न पाउनु हुन्न । किनकी सेयर खरिद गरे पछि मात्र तपाई संस्थाको मालिक वन्नु हुन्छ । शेयर खरिद गर्नु भएको छैन भने तपाई खाली ग्राहक हो । त्यसैले सेयर खरिद गर्नु तपाईको पहिलो कर्तव्य हो ।
कुनै पनि संस्थाको वारे राम्ररी बुझेर मात्र शेयर खरिद गर्नुहोस । छर छिमेक, आफन्त वा अरुको लै लै मा लागेर सदस्य वन्नु भयो वा वचत मात्र जम्मा गर्नु भयो भने तपाईलाई धोका पनि हुन सक्दछ ।
सदस्यहरुमा विभेद गरिएको संस्थाको सदस्य नवन्नुहोस ।
२. सहकारी संघ/संस्थाहरुले कारोवार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु ।
संस्था संचालनका लागि समिति उपसमितिहरु गठन गरी, आवश्यक नीतिहरु तयार गरेर मात्र कार्य संचालन गर्नुहोस् ।
सदस्य वनाएर मात्र कारोवार गर्नुहोस । ऋण लिने उद्देश्यले मात्र सदस्य वन्न आउने मानिसलाई सदस्य नवनाउनुहोस् ।
शेयरमात्र खरिद गर्ने, वचत नगर्ने र संस्थाबाट ऋण नलिने, संस्थाको अन्य गतिविधिमा संलग्न नहुने सदस्य निस्क्रिय सदस्यहरु हुन् । यस्ता सदस्यहरुलाई राखिरहनु संस्थाको हितमा हुंदैन । कम्पनी व्यवसाय जस्तो पूंजी मात्र लगानी गरेर असिमित लाभांश लिने कम्पनी व्यवसाय यो होइन ।
संस्थाको उद्देश्यसंग मेल खाने प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र सदस्य वनाउनुहोस् । निजी तथा कम्पनी व्यवसाय जस्ता संस्थालाई सदस्य नवनाउनु होस ।
आज सदस्य वनेको व्यक्ति भोली संस्थाको संचालक समेत हुन सक्ने भएकोले सदस्य वनाउंदा संस्थाको कार्यक्षेत्रको स्थायी वासिन्दा हो होइन ? उसको स्वभाव, आचरण, समेतलाई ध्यान दिनुहोस ।
सहकारी संस्थाहरु प्रतिस्पर्धी नभइ पारस्परिक सहयोगी संस्थाहरु हुन्, त्यसैले अर्को संस्थाको सदस्यलाई आपूmमा आकर्षित गर्ने, सदस्य वनाउने कार्य नगर्नुहोस । एउटा मात्र व्यक्ति खराव भएमा तपाईको संस्था धरासायी हुन सक्छ ।
सदस्य आकर्षण गर्नको लागि वचत निक्षेप तथा ऋणमा दिने लिने व्याजमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा गर्नु हुंदैन ।वचत तथा ऋणको कारोवार गर्दा सहकारी विभागले जारी गरेको मापदण्डले निर्धारण गरेको परिधिभित्र रहि वजारको अवस्था हेरेर व्याजदर निर्धारण गर्नुहोस ।
संस्थाको उद्देश्य अनुरुपको कार्यमा जोड दिनुहोस । उद्देश्य अनुरुपको कार्य नगरेमा, नियमित लेखा परीक्षण र साधारण सभा नगरेमा तपाईको संस्था खारेज गर्न सकिने छ ।
सहकारीको मूल्य, सिद्धान्त, प्रचलित ऐन , नियम र मापदण्डको अध्ययन गरी सोही अनुरुपको व्यवहार गर्नुहोस । यसको पालन नगर्ने सहकारी संस्थाको कारोवार एवं वैंक खाता समेत रोक्का गर्न सकिनेछ ।
भौगोलिक कार्यक्षेत्र नाघी कार्य गरेको वा गैह्र सदस्य कारोवार गरेको तथा संस्थाको सम्पत्ति निजी व्यवसायमा लगाएको जस्ता कार्य गरेमा संचालक समितिका पदाधिकारी, व्यवस्थापकलाई ठगीको अभियोगमा कारवाई हुनेछ ।
समयमै लेखा परीक्षण, साधारण सभा सम्पन्न गर्ने, तोकिएको अवधिमा प्रगति विवरणहरु पठाउने गर्नु होस अन्यथा जरिवाना हुनेछ ।
१५ प्रतिशत भन्दा वढी शेयर लाभांश वितरण नगर्नुहोस । संरक्षित पूजीकोषको रकम संस्थालाई नाफामा लैजान महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने संस्थासंग कारोवार गर्ने सदस्यको कारोवारको आधारमा वितरण गर्नु होस ।
संस्थाको दिगोपनका लागि समय समयमा पर्लस अनुगमन गर्ने, जोखिम ऋण कोष स्थापना गरी तोकिएको रकम छुटृाउने जस्ता कार्यहरु गर्नुहोस ।
सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले याद गर्नुपर्ने कुराहरु
शेयर खरिद गरेपछि तपाई सदस्य हो । सदस्य भनेको संस्थाको मालिक हो । सदस्यले साधारण सभामा भाग लिने, निर्वाचनमा भाग लिने र आफ्नो संस्थाको संचालकहरुको निर्वाचन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ ।
सहकारी व्यवसाय सदस्य केन्द्रित र सदस्यहरुको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा चल्ने व्यवसाय हो । संस्थामा कुनै किसिमको हिनामिना भयो भने त्यसको जिम्मेवार तपाई पनि हो , यसर्थ संस्थाको गतिविधि प्रति सदा चनाखो भै व्यवसायमा संलग्न हुनुहोस । संस्थाको असफलता प्रति तपाईले गुनासो गर्ने अर्को ठाउं्र छैन ।
संस्थाको सदस्य वन्नु भयो तर संस्थासंग कुनै कारोवार गर्नु भएन, सहभागिता जनाउनु भएन भने तपाई निस्किृय सदस्य हो । त्यसैले संस्थाका हरेक गतिविधिमा सक्रिय सहभागिता जनाउनुहोस ।
संस्थाको सदस्य भएपछि संस्थाको सफलता र असफलताको जिम्मेवारी तपाईले पनि लिनु पर्दछ । संचालक तथा व्यवस्थापकलाई मात्र दोष दिन पाइदैन । यसर्थ संचालक व्यवस्थापकका गतिविधि प्रति सदा चनाखो वन्नुहोस ।
संस्थामा खराव सदस्यको आगमन र कृयाकलापलाइ समयमानै रोक्ने दायित्व तपाईको पनि हो । संस्थामा स्वयं गै कारोवार गर्नुहोस । वचत संकलनकर्ताको भरमा मात्र वचत नगर्नुहोस ।
संस्थाको हित विपरित हुने आपूmलाई जानकारीमा आएका गतिविधिहरुलाई संचालक, सदस्य माझ सूचना सम्प्रेषण गर्नुहोस वा गलत निर्णय हुनबाट समयमानै रोक्नुहोस । त्यस्तै राम्रा सूचनाहरु समयमानै दिएर संस्थाको हित प्रवद्र्धन गर्नुहोस ।
संस्था तपाई सदस्यकै हो , संस्था विग्रीयो भने दोष तपाइकै हो । यो कुरा बुझ्नुहोस ।